Alia Bhatt Oo 10 Milyan Oo Taageereyaal Ah Ku Yeelatay Twitter - Hablaha Media Network
Alia Bhatt Oo 10 Milyan Oo Taageereyaal Ah Ku Yeelatay Twitter
HMN:- Atariishada dhallinyarada ah ee Bollywood Alia Bhatt waxay maalin kasta higsaneysaa heer kale. The Bubbly Actress ayaana haatan u dabaaldegtay inay 10 milyan oo taageereyaal ah ku yeelatay mareegaha Twitter.
23 sanno jirtaan Alia Bhatt ayaa haatan ka mid ah atariishooyinka loogu jecel yahay Bollywood. Waxayna u mahadcelisay dhammaan shaqsiyaadka ku xiran ee ka caawiyey inay rikoorkaan gaarto.
Atariishada filimka Udta Punjab ayaa kusoo qortay akoonkeeda Twitter inay kaga mahadnaqeyso taageereyaasheeda 10ka milyan ee jaceylka ah ee ay u muujiyeen.
Dhanka shaqada, filimkeeda xigga wuxuu noqon doonaa Badrinath Ki Dulhania oo ay la hogaamineyso atooraha wada shaqeyntooda la jecel yahay ee Varun Dhawan.